I-RØDE Ikhipha I-Podcast Production Studio! | Martech Zone
Into eyodwa engizokwabelana ngayo kulokhu okuthunyelwe yimali nesikhathi engichithe ukuthenga, ukuhlola nokuhlola imishini yama-podcast ami. Kusuka kusihlanganisi esiphelele nasesitudiyo, kusitudiyo esihlangene engingakwazi ukusiphatha esikhwameni, ngiye kuma-microphone e-USB engingawaqopha nge-laptop noma i-iPhone… Ngizame konke.
Inkinga kuze kube yimanje bekulokhu kuyinhlanganisela yezivakashi ezikwi-studio nezikude. Kuyinkinga yokuthi ngaze ngathinta abanye abakhiqizi ukubona ukuthi ngingahle ngibe nomuntu ongakha uhlobo oluthile.
Akuyona inkinga eyinkimbinkimbi, kepha idinga i-Hardware ethile eguquguqukayo. Uma unezivakashi eziningi ngokungeziwe kusihambeli esikude, ukubambezeleka kwesivakashi esikude kuzodala ukunanela kwezwi laso kumahedisethi aso. Ngakho-ke, kufanele udale ibhasi elishiya izwi lesihambeli esikude kokukhiphayo okubuyela kubo. Lokhu kwaziwa njenge-mix-minus.
Kepha angikwazi ukuhudula ngixube okuhleliwe emgwaqeni ngaphezu kwayo yonke imishini, ngakho-ke ngithole ukuthi ngakha kanjani ukumisa okufanayo ngisebenzisa ibhasi ebonakalayo kwi-MacBook Pro yami. Futhi kuseseyisihlungu esinqeni ukusetha.
Manje, wonke umuntu onephupho lokwenza ama-podcast asezingeni eliphezulu uzokwazi ukwenza lokhu ngokukhululeka nale nkundla entsha futhi enamandla. Lesi isiqondisi esisha esimangazayo se-RØDE: isitudiyo esikuso sonke sabapodcasters kuwo wonke amazinga.
Bengivakashela umdwebi wami wevidiyo namhlanje, u-Ablog Cinema, futhi uzobuza ukuthi ngiyibonile yini entsha I-RØDECaster Pro - I-Podcast Production Studio. Nasi ukubuka konke.
Kodwa linda… kuningi. Nayi i-rundown enemininingwane:
Ngabe uRØDE ucabange ngayo yonke into? Izici zebhodi zifaka:
Iziteshi ezine zemakrofoni: Ikilasi A, okokufaka okususelwa ku-servo okwazi ukunika amandla imakrofoni yesitudlizisi se-studio kanye nemibhobho ejwayelekile enamandla.
Okokufaka okuhlukile kwe-3.5mm TRRS (ifoni noma idivayisi), Bluetooth (ifoni noma idivaysi) kanye USB (kumculo / umsindo noma izingcingo zohlelo lokusebenza)
Amakholi wefoni nohlelo lokusebenza - ngaphandle kwe-echo (mix-minus). Lungisa kalula amazinga - awekho amagiya angeziwe noma ukusethwa okungcolile okuhilelekile.
Amaphedi wemisindo ehlelwe: Imisindo engu-8 enemibala egqamile yemisindo edonsela ama-jingle ahlelwe kanye nemisindo.
Kuhlelwa ku-RØDECaster ™ Pro noma kukhompyutha yakho nge-software.
I-APHEX® Exciter ™ neBig Bottom ™ukucutshungulwa kwelungelo lobunikazi lalelo thoni elicebile nelifudumele litholakala kuphela ezinhlelweni zokusakaza eziqeqeshiwe. Futhi kufaka phakathi ukuguquguquka kwemigqa eminingi: ukuminyanisa, ukukhawulela nokubanga umsindo.
Isikrini sokuthinta ivumela ukulawulwa okulula kwazo zonke izilungiselelo, kufaka phakathi ukusethwa kwesilinganisi kwebanga lezwi lobuchwepheshe.
Imiphumela emine yekhanda eliphezulu lamandla nesipikha se-stereo ngaphandle, ngayinye inezilawuli zevolumu ezizimele.
Amarekhodi aqondiswe ekhadini le-microSD ngokusebenza okuzimele ngokuphelele, noma kwikhompyutha nesoftware oyikhethayo nge-USB.
Amandla okusakaza bukhomaUmsakazo wanamuhla!
Lokhu akumangalisi! Ukuba neziteshi zomsindo ezihleliwe kuzongivumela ukuthi ngihlele kuqala isethulo sami, ukuphuma kwami, nezikhangiso endizeni ukuze ngikwazi ukuqopha ngokoqobo futhi ngilayishe ekusingatheni kwami ​​i-podcast.
Kuthiwani Ngevidiyo Ebukhoma?
Enye inzuzo yale yunithi yikhono lokuyihlanganisa nesistimu efana nayo IStudio Situdio. Okukhipha isitiriyo kungashayela umsindo kudivayisi yakho exhunywe bukhoma futhi ungashintsha ubuye uye emuva phakathi kwe-iPads nesivakashi sakho ngocingo lwe-iPhone FaceTime noma lwe-Skype!
Nginohambo ngonyaka ozayo lokuqopha okuningi Ama-Lodinaries ama-podcast ane-Dell… Futhi lolu phiko luzohamba nami. Iyunithi inesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angama-6 ngakho-ke ngeke kube kubi kakhulu ukugoqa uzungeze. Ngeza kumakrofoni, izintambo, namahedfoni futhi ngingadinga ukuthola okuthile okunamasondo, kodwa lokho kulungile.
Ukube benginesikhalazo esisodwa bekungaba ukuthi uphiko ngeke luqophe umlando. Ngakho-ke, uma isivakashi sikhwehlela ngenkathi esinye isivakashi sikhuluma… unamathele kuso noma udinga ukumisa umbukiso bese uqopha kabusha ingxenye, bese uhlanganisa izingxenye ndawonye ekukhiqizeni okuthunyelwe. Masethembe ukuthi izinhlobo ezizayo zizovumela ukuqoshwa kwamathrekhi amaningi ngekhadi le-micro-SD nemiphumela ye-USB.
Thenga i-RØDECaster Pro ku-Sweetwater
Tags: Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethiistudiyo se-podcastobomvuI-RØDECasterusbusb c
Ukucabanga Kwemiklamo: Ukufaka iRose, iBud, Imisebenzi Yameva Ekumaketheni